Talooyin la xariira Korona Fayraska | espoo.fi
Talooyin la xariira Korona Fayraska
Waxyaabaha ay tahay in la xasuusto inta lagu jiro aafada
Dhaq gacmahaaga had iyo jeer. Isticmaal saabuun ama, haddii loo baahdo, gacan nadiifiye.
Ku qufac ama ku hindhis warqad ama gacanta shaatiga.
Ha dhex galin dadka kale haddii aad leedahay wax astaamo ah.
Ka fogow dadka badan oo ha u dhawaan dadka kale. Xusuusnow masaafada badbaadada (1-2 mitir).
Ka fogow meelaha dadku isugu yimaadaan, ha taaban meelaha gacanta la saari karo (tusaale, gacan qabsiga tareenka) ee guriga ka fog. Cudurku wuxuu si fudud ugu fidaa meelaha ay dad badani booqdaan.
Xeerarka karantiilku waa waajib: lama kulmi kartid cid aan ka ahayn kuwa isla guriga kugula nool
gudaha dhammaan goobaha firaaqada, gaadiidka dadweynaha, goobaha banaan, munaasabadaha dadweynaha, hiwaayadaha, dukaamada iyo adeegyada
gudaha isboortiga gudaha dhismaha, marka laga reebo inta lagu jiro ciyaarta
marka la joogo dugsiyada dhexe, dugsiyada sare iyo mac'hadyada waxbarashada sare
marka la joogo xarumaha dhallinyarada
marka la joogo xarumaha xannaano-maalmeedyada iyo marka la keenayo iyo la kaxaynayo carruurta
goobaha shaqada isku imaad walba iyo marka aad meel ka baxeyso iyo tagayso meel kale. Talada waxay ku toosan tahay goobaha shaqada ee shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ah.
Magaaladu waxay u qaybisaa af-saabyo lacag la'aan ah dadka aan awoodin inay iibsadaan. Dadka kale ee reer Espoo waa inay laftooda soo qaataan maaskarooyinka.
Af-saabyada loogu talagalay dadka danyarta ah ayaa lagu qaybiyaa xafiisyada daryeelka bulshada iyo xafiisyada hay'adda:
Ururka Hyvä Arki, Siltakuja 3 B, Isniin–Jimco 9:00–13:00
Ururka Manna-Apu association, Tuomarilantie 19, Isniin–Jimco 9:00–13:00
Kivenkolo, Merisaapas 1 A, Isniin–Jimco 9:00–11:30 iyo 13:30–14:00
Xafiiska Adeegyada Bulshada ee Espoo, Komentajankatu 5 C, Isniin–Jimco 9:00–15:00
Raitin Pysäkki, Konstaapelinkatu 1 A, Isniin–Jimco 10:00−14:00
Adeegyada Soogalootiga ee Espoo, Pyyntitie 3, Isniin–Jimco 9:00–15:00
Espoon Ankkuri, Matinkartanontie 16 B, Isniin–Jimco 9:00–14:00
Xarunta Adeegga ee Kalajärvi, Ruskaniitty 4, Isniin–Khamiis 13:00–15:30
EJYn Kansalaistoiminnankeskus, Kauppamiehentie 6, Isniin–Jimco 10:00–15:00
Xaddid u dhowaanshaha dadka kale
Ha isu soo uruurina – cudurka COVID-19 wuxuu ku faafaa xafladaha, kulamada asxaabta iyo xarumaha dukaameysiga. Xilligan, munaasabadaha gaarka ah laguma talinayo.
Dhammaan dhacdooyinka guud ee gudaha iyo dibedda iyo shirarka guud waa mamnuuc.
Dhammaan ganacsiyada macaamiisha u furan ee dadweynaha waa la xiray. Tan macnaheedu waa tusaale ahaan dhammaan xarumaha isboortiga gudaha, guryaha dhaqanka, matxafyada iyo xarumaha dhalinyarada ee magaalooyinka. Wax-qabadyadda xarumaha waxbarashada ee dadka waaweyn waa la hakinayaa.
Iska baar COVID-19
Baaritaanka cudurka COVID-19 ayaa loo heli karaa qof kasta oo leh astaamo muujinaya in laga yaabo inay qabaan cudurka COVID-19.
Waad ka qaban kartaa laftaada ballan baaritaan gudaha Koronabotti, koronabotti.hus.fi.
Haddii kale, waxaad wici kartaa khadka telefoonka COVID-19 ee Espoo, 09 816 346 00 (Isniin–Jimco 7:00–18:00, Sabti–Axad 9:00–15:00). Waqtiyada kale, soo wac Khadka Caawinta Caafimaadka, tel. 116 117.
Kaliya booqo xarun caafimaad haddii aad ballan leedahay
Lambarka laga qabsado ballanta ee xarumaha caafimaadka ee Espoo ee arrimaha kale, tel. 09 816 34500 Isniin-Jimco 7:00–18:00.
Ku soo dejiso barnaamijka Koronavilkku app gudaha telefoonkaaga
Barnaamijku wuxuu gacan ka geysan karaa helitaanka dadka laga yaabo inuu ku dhacay cudurka COVID-19. Haddii lagaa helo cudurka, waxaad si qarsoodi ah ugu soo sheegi kartaa gudaha barnaamijka. Barnaamijku sidoo kale wuu ku ogeysiin haddii aad u dhowaatay qof qaba cudurka.
Koronavilkku waa ammaan in la isticmaalo. Barnaamijka Koronavilkku app waxaa bixiya Mac'hadka Qaranka ee Caafimaadka iyo Daryeelka (THL), wuxuuna ka shaqeeyaa Finland.
Waxaad uga soo dejisan kartaa barnaamijka si lacag la'aan ah barta Koronavilkku.fi. Barnaamijka waxaa lagu heli karaa Af-Finnish, Af-Iswiidhish iyo af-Ingiriis. (InfoFinland.fi)
Waxbarashada carruurnimada hore
Xannaano-maalmeedyadu way furan yihiin. Waxaa laguu oggol yahay keliya inaad tagto xarunta xannaano-maalmeedka haddii aad caafimaad qabto. Waxaan idin ka codsaneynaa adiga, mas'uuliyiinta, inaad iska ilaalisaan inaad sii joogtaan gudaha xarunta xannaano-maalmeedka si aad u yaraysaan baylah noqoshada. Carruurtu, waqtigan la joogo, uma soo qaadan karaan alaab-alaabaydooda xarunta xannaano-maalmeedka.
Fadlan xiro maaskaro marka aad keenaysid ama kaxaynaysid ilmahaaga
Waxbarashada dugsiga sare (dugsiyada sare, waxbarashada xirfadaha iyo machadyada tababarka) way ku sii socon doonaa waxbarashada onlaynka. Baahida loo qabo barashada dhawaanshaha ee lama huraanka ah waa la daboolayaa.
Laga bilaabo maktabadaha waxay bixin adeeg xaddidan, oo ay ku jiraan:
Ka soo ururinta waxyaalaha marfishka boos-celinta.
Macaamiladda lagama maarmaanka ah ee degdegga ee kombiyuutarada macmiilka.
Habka adeegga la doorbidaa waa sii ballansasho hore iyo isu-adeegid iyadoo la adeegsanayo mashiinka amaahda otomaatiga ah.
Haddii loo baahdo, caawimaad iyo talo ayaa laga heli karaa kursiga adeegga.
Goobaha gudaha iyo dibaddaba ee ay maamulaan magaalooyinku, waxqabadyada hiwaayadda waxaa kaliya loo abaabulaa carruurta dhashay 2008 ama kadib.
Goobaha Adeegga ee Espoonlahti, Leppävaara iyo Tapiola waa la xiray.
Goobaha Adeegyada ee Espoon keskus, Kalajärvi iyo Matinkylä weli way furan yihiin.
Arrimahaaga ku dhamayso onlayn, haddii ay suurtagal tahay.
Ka fogow safarka aan daruuriga ahayn. Liistada ugu dambeysay ee xayiraadaha safar waxaa laga heli karaa mareegta Dawladda.
Raac tilmaamaha karantiilka
Raac tilmaamaha lagu siiyo haddii aad sugeyso ballankaaga tijaabada fayruska korona ama natiijada tijaabada ama la kullantay qof qaba COVID-19. Tilmaamaha karantiilka luqadaha Af-Finnish, Af-Iswiidhish iyo Af-Ingiriis: espoo.fi/karanteeniohjeet
Fadlan la soco in ku xadgudubka amarka karantiil ee mas'uuliyiinta cudurada faafa lagu muteysto ciqaab.
Tilmaamo dheeraad ah oo loogu talagalay dadka deggan Espoo: www.espoo.fi/coronavirus. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa iswade (smartbot) mareegta magaalada espoo.fi. Waxaad ku weydiin kartaa iswadaha su'aalo ku saabsan fayraska korona in ka badan 100 luuqadood.
Mareegaha kale ay ku jiraan macluumaad ku saabsan fayraska korona iyo astaamaha ee luuqadaha kala duwan ah
Macluumaad guud oo ku saabsan fayraska korona, astaamaha iyo daaweynta ku qoran luuqado kala duwan (muuqaal, Degmada Isbitaalka ee Helsinki iyo Uusimaa)
Macluumaad ku saabsan fayraka korona oo ku qoran luuqado kala duwan (Mac'hadka Caafimaadka iyo Daryeelka ee Finland)
InfoFinland.fi: Fayraska Korona COVID-19. Mareegtan waxay ka kooban tahay xiriiriyeyaasha macluumaad lagu kalsoonaan karo oo ku qoran 12 luuqadood, ay daabaceen maamulka Finland ee khuseeya fayraska korona iyo saameynta uu ku leeyahay gudaha Finland.
Xiriiriyeyaasha laga helo macluumaadka la xiriira fayraska korona ee hay'ado kala duwan
Tilmaamaha IOM Italy ee xaaladda fayraka korona ee kooxaha yar ee luuqadeed (waxaa hubiyay Xarunta Dhexe ee Red Cross, sidoo kale lagu isticmaali karo gudaha Finland)
Yle uutiset waxay ku bixisaa warar maalinle ah Carabi, Kurdi, Soomaali iyo Faaris
Wadajir ayaan ammaanka uga shaqeynaynaa: Waxaan soojeedinaynaa in gaadiidka dadweynaha lagu dhex isticmaalo af-shareerka.
Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan garashada Cudurka Coroona ee waalidiinta iyo qoyska (pdf, 63 Kt)
Hagid iyo macluumaad la xariira korona fayris (pdf, 275 Kt)